भारतमा पनि देखा पर्यो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ''ओमिक्रोन'', नेपालमा बढ्यो जोखिम ! - ramechhapkhabar.com
भारतमा पनि देखा पर्यो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ”ओमिक्रोन”, नेपालमा बढ्यो जोखिम !
विश्वका धेरै देशमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको कहर सुरु भएको छ । यसैबीच ओमिक्रोन भेरियन्ट छीमेकी मुलक भारतमा पनि पुष्टि भएको छ ।भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा ओमिक्रोनका दुई जनामा ​​संक्रमण पुष्टि भएको छ । दुवै केस कर्नाटकमा भेटिएका हुन्। जसमध्ये एक संक्रमितको उमेर ६६ र अर्कोको ४६ वर्ष रहेको छ ।
उनको सम्पर्कमा रहेका सबैको पहिचान भइसकेको र निगरानी भइरहेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।डब्लुएचओका अनुसार हालसम्म लगभग २९ देशमा ओमिक्रोन भेरियन्टका ३७३ केसहरू रिपोर्ट गरिएको छ।
रुस र युक्रेनले दसौँ हजार सैनिक सीमामा पठाएपछि बढ्यो युद्धको खतरा
रुस र युक्रेनले सीमा क्षेत्रमा सेनाको संख्या बढाएपछि पश्चिमा राष्ट्रहरुले युद्धको आंशका व्यक्त गर्न थालेका छन्। रुसले करिब ९० हजार र युक्रेनले एक लाख २५ हजार सैनिक एकअर्काको सीमा क्षेत्रमा पठाएको बताइएको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति बोल्दोमिर जेलेन्स्कीले रुसबाट क्रिमिया फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएकै बेला दुई मुलुकबीच तनाव बढेको हो। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसले आक्रामक चाल चल्ने योजना बनाएको बताएका छन्। नेटो मुलुकका मन्त्रीहरुसँगको बैठकपछि बुधबार लाट्भियाको रिगामा ब्लिन्केनले यस्तो बताएका हुन्।
‘पुटिनले आक्रमण गर्ने निर्णय लिएका छन् कि छैनन्, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर, हामीलाई के थाहा छ भने त्यस्तो निर्णय लिए भने उनले तुरुन्तै आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा सेनालाई राखेका छन्,’ ब्लिन्केनले भने। युक्रेनले जनाएअनुसार रुसले उसको सीमामा सैनिकका अलावा बख्तरबन्द गाडी, विद्युतीय युद्धसामग्री, आदि जम्मा गरेको छ।
रुसले गत एक वर्षमा दोस्रो चोटि सेनालाई युक्रेनको सीमामा जम्मा गरेको हो। तर, यसपटक पुटिनको योजना फरक हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्। यसअघि गर्मीमा रुसी सेना दिउँसै यात्रा गरेर सीमानजिक आएका र पछि फिर्ता भएका थिए। तर, यसपटक रातिराति सेनालाई सीमामा ल्याइएको बताइएको छ। त्यस्तै, पछिल्लो समय अमेरिकी बमवर्षक विमान बारम्बार आफ्नो सीमानजिक आउन थालेको भन्दै रुसले कडा वक्तव्य दिन थालेको छ। उसले युक्रेन र पश्चिमबीचको निकट सम्बन्धलाई नस्वीकार्ने बताएको छ।
अमेरिकाले युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्ने प्रयास गरिरहँदा पुटिनले मंगलबार मात्रै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन्। ‘त्यस्तो परिदृश्यमा हामीले के गर्ने? हामीले पनि त्यस्तै हतियार तैनाथ गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पुटिनले भनेका थिए। हालै रुसले चीनसँग नयाँ सैन्य सम्झौता समेत गरेको छ।
‘रुसीहरु आफूले चाहेको गर्नसक्ने स्थितिमा छन्,’ युक्रेनका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत जोन हर्ब्स्ट भन्छन्। रुसी अधिकारीहरुले आक्रमणको योजना नभएको बताएका छन्। तर, पूर्वी युक्रेनमा हिंसाको खतरा कायमै रहेको उनीहरुले बताएका छन्। एजेन्सी